Xukuumada Puntland oo war kasoo saartay falalkii ka dhacay Bosaso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Xukuumada Puntland oo war kasoo saartay falalkii ka dhacay Bosaso
Xukuumada Puntland oo war kasoo saartay falalkii ka dhacay Bosaso
February 1, 2010 - By: Khalid Yusuf
Xubno ka tirsan Xukuumada Puntland iyo masuuliyiinta Gobalka Bari ayaa maanta kulan looga hadlayo amniga isugu yimid magaalada Bosaaso.
Kulankan ayaa looga hadlay dilalkii dhawaan ka dhacay Bosaso iyo falalka amni xumada ah, ayadoo masuuliyiinta halkaasi isugu yimid shirjaraa’iid ay qabteen kulankaasi kadib Tacsi ugu direen eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Cabdullahi Mahdi Sayidka oo habeen hore lagu dilay magaalada Bosaso.
Shirkan ayaa masuuliyiintii ka qeyb galay kamid ahaayeen:
Wasiirka Amniga ee Puntland, Gen.Cabdullahi Siciid Samatar, Wasiirka Dekkadaka iyo gaadiidka Bada Cabdirsaaq Gaceyte, Wasiir kuxigeenka Arrimaha Gudaha Puntland ahna kusima Wasiirka Guddaha Gen.Yusuf Axmed Khayr, Guddoomiyaha Gobalka Bari Xaaji Muuse Geele Yusuf Farole, Taliye kuxigeenka Ciidamada Booliiska Maxamed Siciid Jaqanaf, Taliyihii Qeybta Gobalka Col.Cismaan Afdalow, Taliyihii ciidamada Asluubta iyo xubno kale.
Waxaa shirka jaraa’iid oo halkaasi lagu qabtay uu ahaa mid Tacsi ay dowlada ugu diraysay Marxuum Cabdullahi Mahdi Sayidka oo habeen hore lagu dilay magaalada Bosaso iyo hadalo ay mas’uuliyiinta uga hadleen falalka amni xumada ah.
Guddoomiyaha Gobalka Bari Xaaji Muuse Geele Yusuf oo halkaasi markii ugu horeysay ka hadlay ayaa yiri:
“….Waxaan halkaan isugu nimid sidii wax looga qaban lahaa amniga dhulkeena oo falal isku xig xigay ay dhawaanahan ka dhaceen Bosaaso….
“….Waxaan rabnaa inaan tacsi u dirno Marxuum Cabdullahi Mahdi, Wuxuu ahaa nin gacan kasiin jiray Dowlada sidii amniga loo sugi lahaa, Waxaa loo dilay maxaa uga shaqeenaysaa amniga Puntland…. ayuu yiri Guddoomiyaha Gobalka Bari oo dar daaran u diray dhalinyarada.
“Waxaan u sheegayaa dhalinyarada in la xuso lana maamuuso Halyeygaasi Cabdullahi Sayidka, waxaana dhalinyarada ku dhiirigelinaynaa nabad geliyada dalkooda iyo dadkooda u sameenayeen inay hawshooda meeshooda kasii wadaan…..ayuu yiri Xaaji Muuse Geele.
Dhegayso Khudbadii Wasiirka Amniga Puntland Gen.Abdullahi Siciid Samatar(By: Horseed Media)[powerpress]
Waxaa asaguna halkaasi ka hadlay Wasiirka Amniga ee Puntland Gen.Cabdullahi Siciid Samatar oo asaguna halkaasi kasoo jeediyey Tacsi ay dowlada Puntland u direyso Marxuum Cabdullahi Sayidka eheladiisa.
Cabdullahi Mahdi wuxuu ku dhintay hawl Qaran..dadka dilayna waxay u dileen hawshii amniga iyo dadaalkii uu bulshada u hayay balse waxaan u sheegaynaa in 100 Sayidka soo baxayaan,wuxuuna Cabdullahi Sayidka maanta lamid yahay 13kii dhalinyaro ee SYL, wuxuu u dhintay nabadeynta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland….” ayuu yiri Gen.Samatar oo sheegay in Dowlada Puntland ay tacsi u direyso ehelada Marxuumka.
Wasiirka Amniga Gen.Cabdullahi Siciid Samatar ayaa ka hadlay falalkii amni xumo ee ka dhacay guddaha Puntland, wuxuuna sheegay in adduunka ka dhacaan falal caynkaan ah, Wadanka Maraykanka oo ugu awood badan caalamkana dad lagu dilo, oo siqarsoodi ah qof loo dilo, balse dowlada Puntland wax badan bay ka qabtay arrimahan ka dhacay Puntland, ayuu yiri Wasiirka.
Puntland way ku guuleysatay inay soo qabato kuwii dilalka horey u geystay isla markaana sharciga lasoo hortaagay, hadana baaritaanka dilkii iyo falalkii ugu danbeeyey wuu socda meel fiican buuna marayaa ayuu yiri Wasiirka Amniga oo sheegay in Puntland ay soo qaban doonto dadka falalkan geysta.
Waxaa asaguna halkaasi ka hadlay ugu danbeyn Wasiir kuxigeenka Arrimaha Gudaha ahna siihayaha Wasiirka Arrimaha guddaha Gen.Yusuf Axmed Khayr oo ka hadlay dilkii Cabdullahi Mahdi Sayidka.
â€œâ€¦.Cabdullahi Mahdi Sayidka waxa kale looma dilin waxaa loo dilay hadalkii uu ka jeediyey kulankii ugu danbeeyey ee amniga looga hadlayey ee ka dhacay Bosaso, halkaasi oo uu si geesinimo ku jirto uga sheegay in dhalinyarada u dhimanayaan amniga dalkoodaâ€¦taasna hada way dhacday waana nin geesi ah oo ummada Puntland kawada dhintayâ€¦balse Dhalinyarada waxaan ku leeyahay falkan yuusan idin cabsi gelin ayuu yiri Gen.Yusuf Axmed Khayr.
Gen.Yusuf ayaa ka hadlay habka loo abaari karo loogana hortagi karo dadka uu ku sheegay inay dagaal kuwadaan Puntland.
“….hadii aysan shacabka si dhameystiran ulla shaqeyn dowlada dhibaatooyinkan oo kale way dhacayaan Bulshada iyo dowlada ayagoo gacmaha isheysta waa inay dagaal la galaan kuwa dagaalka nagula jira ee aan cidna u arxan yeelayn….” ayuu yiri Gen.Yusuf Axmed Khayr oo sheegay in ay jiraan kooxo aan marnaba jecleyn amniga ka jira Puntland.
Kulankan ayaa ahaa mid sidoo kale looga hadlay qaraxii bam ee xalay lala beegsaday gurriga Wasiir kuxigeenkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga, kulankan oo ay si gaar ah masuuliyiinta dowlada iyo gobalka u wada qaateen, ayaa lagu sheegay in lagu xoojin doono amniga magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari.
Dhanka kale waxaa ayaguna maanta baaq kasoo saaray Boosaaso, Issimada gobalka Bari. Waxayna tacsi u direen ehelada Marxuum Cabdullahi Mahdi Sayidka.
Afhayeenka Issimada Maxamed Yusuf Cabdi oo baaqan akhriyey ayaa sheegay in Issimada ay shacabka u direen baaqa ah, in lala shaqeeyo ciidamada amniga sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dadka falalkan geysta, loogana hortagi lahaa hawlaha amni xumada ah.
Tagged With: Bosaaso, cabdullahi Sayidka